musha ASIAN FOOTBALL STORI Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname;'Micki'. Our Henrikh Mkhitaryan Childhood Story pamwe ne Untold Biography Facts inokutaurira zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvekunyanya kushandiswa kwaHenrikh Mkhitaryan uye kubatsira masimba asi vashomanana vanoona upenyu hwake kunze kwechimiro chakanakidza. Iye zvino kunze kwekuwedzerwa kwesei, rega kutanga.
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Henrikh Mkhitaryan akaberekwa pa 21st yaJanuary 1989 muYerevan, guta guru reArmenia kune vabereki- mutambo wekare wekare, Hamlet Mkhitaryan (baba) uye Marina Taschyan (amai).
Muna 1989, paakanga ava nemwedzi mishomanana chete, mhuri yake yakatamira kuFrance nemhaka yeimwe nharo dzaive dziri kuArmenia. Baba vake vakatamba makore mashanu kuValence muchechi yechipiri yeFrance.
Maererano neHenrikh .."Pandakanga ndiri 4, ndaigara ndichichema apo baba vangu vaizoenda kuchikoro. Mangwanani oga oga ndichati, 'Baba, nditorei neni. Ndapota, ndapota nditorei neni! '
Pazera iroro, ndakanga ndisingafungi nezvebhobho, asi ndaida kuva nababa vangu. Asi haana kuda kutsauswa panguva yekudzidziswa nekufunganya pamusoro pangu kumhanya, saka akauya nechinangwa chokunyengera. Rimwe mangwanani, ndakati, 'Baba, nditorei kuti ndidzidzise.'
Akati, 'Kwete, kwete. Hapana kudzidziswa nhasi, Henrikh. Ndiri kuenda kudhipatimendi. Ini ndichadzoka zvakare. ' Akapukunyuka kunodzidziswa, uye ndakamirira ... uye ndakamirira. Akadzoka kumusha shure kwemaawa mashomanana. Kwete zvekudya. Ndakarashika. Ndakatanga kuchema.
'Wakareva nhema kwandiri! Iwe hauna kuenda kudhipatimendi! Iwe wakaenda kunotamba bhora! '
Baba vake vakagadzirwa nokuda kweizvi kuburikidza nekutora Henrikh muduku kuti aone mabasa echando aaida semucheche.
Hamlet Mkhitaryan nemwanakomana Henrikh
Uyewo kubvira pazuva iroro kumadhiro, Hemlet akatanga kutora mwanakomana wake kudzidzisa pasi. Henrikh akakurumidza kukudza rudo rwebhola uye akatanga kutevera tsoka dzababa vake sezvaaimutarisa. Ndaigara ndichida kuva mubhokisi uye ini ndinovonga vabereki vangu, avo vakandibatsira zvikuru kuti ndione kurota uku. "
Iwe vabereki vake vaida bhora kumunhu asiwo akasimudzira dzidzo inofanira kunge yakakodzera kumwana wavo. Miki akadzidza kusanganisa zvose dzidzo uye yebhola mumutambo wakanakisisa. Akakurira kuva mukomana akajeka mukomana.
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kukurira Mukurumbira
Akadzidza bhora kubva kuna baba vake Hamlet uyo aiva mukurumbira mukurumbira munguva yake muZ1908s. Zvinosuruvarisa, rufu rwekutanga rwebaba vake rwakamubaya mwoyo kwazvo (Tsanangudzo yekufa kwake kukurukurwa gare gare munyaya). Henrikh anonzwa kuti kudai baba vake vachiri vapenyu, "Zvinhu zvose zvaizova zvakasiyana." Mumashoko ake, "Gore mushure mekufa kwababa vangu, ndakatanga kutamba kwebhora. Akanga ari mutambo kwandiri, akanga ari chifananidzo changu. Ndakati mumoyo mangu, ndinofanira kumhanya sezvakaita iye. Ndinofanira kupfura sezvakaita iye. "
Iwe, baba vake vakamupa mazano anobatsira kubva kune unyanzvi hwemaonero asati afa. Aigona kungonakidzwa nababa vake kwemakore 7. Baba vake vakafa apo aingova 7 chete. Vanhu vakatarisa Mkhitaryan nababa vake, vanoti maitiro avo akafanana zvikuru. Miki akamboti, "Ndinotenda kuti anondiona uye anozvikudza neni ^"
Paakadzokera kuYerevan kubva kuFrance, Henrikh akanga atoziva basa raaida kuita. Mkhitaryan akabatana nechikwata chikuru cheYerevan FC Pyunik mu1995. Akabva azviona achikura kuva mumwe wevatambi vane tarenda.
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Mhuri yake yose ine mubatsiro mumutambo wenhabvu. Apo iye nababa vake vakabudirira pamunda, vakadzi mumhuri yavo vakazvigadzirisa. Zvino regai kutaura pamusoro pavo;
BABA: Hamlet Mkhitaryan, baba vaHenrikh vaimbove varemekedzwa uye vakakurumbira FC Ararat Yerevan panguva ye1980s. Akanga ari musikana muduku asi akakurumidza. Soviet Soldier magazini yakambomukudza nayo "Knight of Attack" mubayiro mu 1984.
Iye nemhuri yake vakambogara mune Kentron district of Yerevan, iri pedyo neHrazdan Stadium yeAmenia. Avo vakaona vose Hamlet naHenrikh vachitamba vanoti maitiro avo akafanana zvikuru. Zvinosuruvarisa, Hamlet akafa nechirwere cheuropi pazera remakore 33 apo Henrikh aiva nemakore manomwe.
Iyi nhoroondo kubva kuna Henrikh paakafa baba vake.
"Nguva yangu nababa vangu yaizova nechinangwa, asiwo yakaipisisa. Pandaiva nemakore matanhatu, vabereki vangu vakanditaurira kuti taive kudzokera kumusha kuArmenia. Ndakanga ndisingazivi chaizvo zvaiitika. Baba vangu vakanga varega kutamba bhora, uye aive pamba nguva dzose. Ndakanga ndisingazvizivi, asi baba vangu vakanga vane uturu hwepfungwa. Zvose zvakaitika zvikuru kwazvo. Mukati megore, akanga aenda. Nokuti ndakanga ndichiri muduku, handina kunzwisisa zvakakwana pfungwa yekufa. Ndinoyeuka ndichiona mai vangu nehanzvadzi yakwegura nguva dzose vachichema, uye ini ndaizovabvunza, "Baba vangu vari kupi?" Hapana aigona kutsanangura zvaiitika. Zuva nezuva, vakatanga kundiudza zvakanga zvaitika. Ndinoyeuka amai vangu vachiti, 'Henrikh, haazombovi nesu.' Uye ndakafunga kuti, Handimboiti? Hazvambovi nguva yakareba yakadai apo iwe uri nemakore manomwe.
I aiva nemapapapapata akawanda aaiita muFrance, uye ndaiwanzovatarisa kakawanda kuti ndimuyeuke. Nhatu, katatu pavhiki ndaizotarisa mitezo yake, uye yaizondipa mufaro mukuru, kunyanya apo kamera yakamukuratidza paaipemberera chinangwa kana kukumbirisa vashandi vake. Pamavhidhiyo mapepa, baba vangu vakararama. akati Henrikh Mkhitaryan
AMAI: Amai vake Marina Marina Taschyan vakaita basa rababa naamai mushure mekunge Henrikh afa baba vake.
Maererano naye .."Yaiva yakaoma kwazvo, nokuti amai vangu vaifanira kuva amai uye baba kwandiri. Zvakaoma zvikuru kuti amai vaite izvi munzanga. Aifanira kunamatira, uye dzimwe nguva akaoma neni sezvakaita baba. Ndaiva nemazuva pandakanga ndichidzoka kumba ndichibva kunodzidziswa ndichiti, 'Ah, zvakaoma kudaro. Ndinoda kusiya. '. Uye amai vangu vaizoti, 'Iwe hausi kurega. Iwe unofanirwa kuramba uchishanda, uye zvichava nani mangwana.' Mushure mekufa kwababa vangu, amai vangu vaifanira kutora basa kutsigira mhuri yedu. Saka akatanga kushanda muAarmenian football federation.
Marina Taschyan anozosvika musi mukuru mukuru weDhipatimendi reMatunhu muArmenian Football Federation. Henrikh Mkhitarvan akambogovana mufananidzo weamai vake naamai vake pa Twitter kuti vachengete zuva rekuberekwa kwamai vake. Mutsva, akadaro "Rudo rwaamai haruna chinhu munyika, kufara kwekuzvarwa, amai". Vazhinji vateveri vake havana kufunga kuti ndiye mai vake. Ichi ndechokuti akatarisa vaduku.
HANZVADZI SIKANA: Hanzvadzi yake inoshanda paEFAFA Headquarters. Anoda kuwana hupenyu iye oga. Iwe Miki dzimwe nguva unomubatsira mune zvemari izvo zvaanoda nguva dzakawanda. Muhurukuro,
iye akamuudza mumashoko ake ..."Hapana chinhu chakadai se 'yako neyangu'. Tiri mhuri, uye zvose zvatinowana ndezvedu ".
Micki naMonika vakagara vachiyeuka kufara kwevana pamwe chete. Vose vari vaviri vanotarisa zvikuru sezvakaratidzwa mumufananidzo uri pasi apa.
Wechiduku Henrikh (kuruboshwe) naMonika (kurudyi)
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Henrikh Mkhitaryan ndiye murume chero musikana aizoda kuroorana ... Kunyange, vasikana, musakurumidza kuvimba naye - Henrikh haasisina nguva yavo! Kwete iye zvino kana munguva yemberi iri pedyo. Mkhitaryan inotarisa pamabasa ake uye isina kuroorwa. Uye haana chinangwa chokudanana nemunhu chero upi zvake kusvikira asvika kumakore akakwana kwazvo e30 akambotaura. Iwe wave akaonekwa nevanasikana vakawanda. Tiri kutengesa iwe unoshamisika kuti haana mudzimai
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -A Chess Mudzidzisi
Kana ichienzaniswa nevatambi vese vepanyika, Mkhitaryan inonzi yakasiyana. Ane humwe hukuru hwekuziva. Wake ruzivo mumutambo wemutambo unobatana naye chesi unyanzvi. Mune mamwe mazwi, rudo rwaHenrikh Mkhitaryan rwe chess inopindirana nechiyero chake njere. Hazvishamisi kuti pane imwe nguva akaratidza vateereri vake nechinangwa chekurova.
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Zvidhori Zake
Zvimwe zvisingadikanwi nemudziri ari kurwisa akakurira muFrance, chifananidzo chechikwata cheMkhitaryan chaimbova Real Real CF uye mutambi weFrench World Cup-win Zinedine Zidane.
Maererano naMikki ..."Nenguva yandakanga ndava nemakore 10, upenyu hwangu hwose hwaiva yebhola. Kudzidzira, kuverenga, kutarisa, kunyange kutamba nhabvu paPlayStation. Ndakanga ndakatarisa zvachose pairi. Ini ndainyanya kuda vatambi vekusika - maestros. Ndaigara ndichida kutamba saZidane, uye Hamlet. Ndakanyatsokoshesa maitiro aZidane ekutamba uye zvaakaita panzvimbo iyi. Akange akaita semashiripiti kwandiri. Nzira yangu yepakati yemutambo inobatanidza zvakanyanya kuZidane apo kurwisa pfungwa pfungwa inoreva zvakawanda kune baba vangu vakaguma. "
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Vakadzidza Kudzidza
Mhuri yeMkhitaryan yakadzokera kuYerevan, guta guru reArmenia kubva kuFrance mu1995. Mugore rimwechete Mkhitaryan akanyoresa Institute of Physical Culture in Armenia. Akapedza purogiramu yavo yediploma ndokuenda pakunyoresa kuti adzidze economics pabazi reYerevan ya St. Petersburg Institute.
Paakapedza kudzidza, Miki akagadzirawo zvirongwa zvekuita imwe dhigirii mumutemo. Zvinosuruvarisa, izvi hazvina kuitika sezvinodiwa kwaari kuti atore bhodhi rehutano zvakanyanya kuuya zvakadanidzira. Iyi nguva yakaratidza kupikisa kukuru mubasa rake remabasa. Akasiya chikwata chechidiki chechidiki FC Pyunik (chiri muArmenia) uye akaenda kuUkraine kunotamba neClubs Club Metalurh Donetsk uyo akamupa chipo chakanaka chaakagamuchira.
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kushandisa Nights paChip Training Ground
Mkhitaryan aizivikanwa nokuti haasi kugara muimba yake oga asi achipedza humwe husiku hwake pachikwata chake chekudzidzisa. Akaita izvozvi kumakwikwi ose aakamboita.
Kutaura neArmenian pepanama.am muna February 2017 akati, "Sezvo ndava chimwe chinhu chechifananidzo uye vazhinji vanotarisa kwandiri, ndinosarudza kungofunga nezvebhokisi rangu kuitira kuti ini ndigone kufadza. Kunyange iwe zvinoreva kupedza usiku husiku paunodzidzisa pasi kudzimba dzimba. Pamakwikwi ose andakaita, ndakaona boka rangu-vakaroorana vanondinyengedza kana vaona maitiro aya kubva kwandiri. Vakatotumidza zita rangu kuti Mutungamiriri [wekudzidzira pasi]. "
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kutanga kweNickname Yake
Mkhitaryan yakatumidzwa nezita 'Heno ' nevateveri vake muArmenia. Akagamuchira zita racho iyo ndiyo mavara mapfupi ezita rake rokutanga 'Henrikh'. Zvisinei, anozivikanwa muEurope sa Micki. Mkhitaryan akabudiswa mubvunzurudzo kuti zita rainzi Micki rakabva kune aimbova maneja weBurussia Dortmund, Jürgen Klopp. Jurgen akasarudza kumupa zita iroro rekunyora mushure mokucherechedza zita rake 'Mkhitaryan' aiva kureba kwenguva refu kutaura. Mkhitaryan akapindura kuti zvakanaka kuti tishandise zita rezita iri. Kugoneswa kwekupedzisira kwezita rezita rezita rakasvika apo zita rake rekudanwa rakaratidzwa paakavimbiswa Instagram nhoroondo yezita remutauro is micki_taryan.
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Yakambosvikirwa Sao Paulo
Muna 2003, Mkhitaryan, akwegura ye14 aiva nematambudziko naSão Paulo muBrazil akabudirira. Akatamba chikwata chechidiki chechikwata. Iri boka rakada kufanana naOscar dos Santos Emboaba neHernanes. Akatamba pamwe navo. Kugara kwake pachikwata chakanga chasara. Henrikh Mkhitaryan akadzokera kuPyunik, kambani yake yeArmenia mu2004. Yaiva ndiye mutariri weMihai Stoichiţă uyo akatsigira kudzokera kuArmenia.
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -A Polyglot
Mkhitaryan is confirmed polyglot, iye ane simba rokutaura zvikamu zvinomwe zvemitauro. Mitauro iyi inosanganisira Armenia, French, Portuguese, Russian, Ukrainian, English, uye German. Miki anopa ruzivo rwake rweRussia kuna mbuya vake vamai, vanobva Russian ethnicity.
Akadzidza mitauro mitatu yokutanga (Armenian, French uye Portuguese) achiri muduku, nevana vekupedzisira vakagadzirira kutamba Shakhtar Donetsk muUkraine, Borussia Dortmund muGermany, uye Manchester United muEngland.
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Mubayiro uye Charity
Mu 2012, nechisarudzo cheYerevan City Council, uye maererano neguta re2794th yegore, Mkhitaryan yakapiwa ne "Mhuri Yakanaka Yerevan" chinyorwa, nokuda kwekubudirira kwake kukuru mubhoza uye kubudirira kwake kwakanakisa mumitambo. Cherechedza: Yerevan ndiro guta reArmenia.
Mkhitaryan anozivikanwawo munyika yekwake kuti ave munhu ane rupo. Munguva yezororo yezororo, anowana nguva yekushanyira nharaunda dzakakakavadzana dzeimboimbova Solviet Union kupa zvipo kumhuri dzevarwi vakarara. Rudo rwake rwamuwana iye mubairo we 'NKR Medal'.
NKR zvinoreva (Republic of Nagorno-Karabakh). Iyi ndiyo mhirizhonga yenyika inopiwa neChr Prime Minister. Inopiwa kuvanhu vanoonekwa sevatungamiriri vemarudzi.
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kutungamira Armenia National Team
Mkhitaryan ndiArmenia's all-time top goalscorer, kugovera 22 zvinangwa mumitambo ye international 64 kubvira pakutanga kwake munaJanuary 2007.
Mkhitaryan akasarudzwa muArmanian Footballer of the Year kanomwe (gore negore kubvira 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 uye 2016). Akatungamirira boka racho kuburikidza nemakore akawanda aya sevatungamiriri.
Muna 2012, akavhotiwa seShakhtar mutevedzeri mukuru wegore ra 2011-12 nevatori. Mugore iroro, akazotumidzwawo kuti Ukraine Premier League Footballer of the Year. Uyewo mu2012, Mkhitaryan akatumidzwa muEFAFA's Top 100 mutambi ne UEFA European Football Yearbook 2012-13. Zvakare, akavhota Commonwealth ye Independent States Footballer yegore ye 2012, achimuita iye wekutanga weArmenian muchengeti webasa kuti atumidze mutambi wepamusoro kubva kune dzimwe nyika dzeSoviet. Akagamuchira mubairo zvakare nokuda kwe2013.
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Zvirongwa Zvenguva Yemberi
Achiri vaduku, Mkhitaryan zvisinei asi anotsigira kuti haana zvirongwa zvekuenderera mberi achishanda mubhola kana achinge asara. "Handizvioni ndiri mutevedzeri, iyo haisi mukombe wangu weti. Handidi kuti vhudzi rangu rive jena kuti nokukurumidza! " Pane kudaro, hupenyu huri shure kwebhola huchave huri hwebhizimisi-hunotarirwa kuMkhitaryan, uyo ane diploma kubva ku Institute of Physical Culture muArmenia uyewo nedhigiri mu Economics kuSt Petersburg Institute.
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Akatosvika kuLiverpool muna 2013
Muzhizha re2013, iye zvino Liverpool maneja Brendan Rodgers akamboita kuti Mkhitaryan awedzere kutungamirirwa.
Kare kare, ndiye akanga achitungamira chinangwa chekukwira ndege muUkraine yakakwira mumwaka wakapfuura, achicherechedza 25 vavariro mumitambo ye 29 yemakambani eShakhtar Donetsk. Nebasa racho rava kuda kuita uye mharidzo yekuti achibhururuka achienda kuAnfield kuti aite zvekurapa zvinyorwa, nhamo yakazotevera. Liverpool vatevedzeri vaifara zvakaderedzwa. Icho chichinyorwa chekuisa chikwata chavo pakati pevaya vanozovhenekera Anfield chakanga chakasarudzwa nemukuru weBurussia Dortmund Jurgen Klopp. Jurgen akaita chikwata chaasakwanisa kuramba uye akasarudza Signal Iduna Park seimba yake yemberi pane Anfield.
Iwe Mkhitaryan wakatsigira kuti yakanga isiri mari, asi chikwata chebhola Dortmund chakatamba chakaita kuti agamuchire chipo chaKlopp.
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Rimwechete rakagara muItera neJose Mourinho
Mkhitaryan, paakauya kuManchester United akagara muEustry Hotel yakakwirira kwegore. Kugara kwake ikoko kwakakurudzirwa Jose Mourinho uyo aigara ikoko nemhuri yake panguva imwe chete. Panguva iyoyo, mapato maviri aya akanga ari matsva kuti agare muguta. Pfungwa yekugara muhotera isati yatenga kana kutora imba muManchester isarudzo yakasarudzwa kune vapfumi vanouya kuguta guru kuti vashande. Maererano naMicky, "Jose akati haana kunyatsoziva nezveguta racho pachayo asati auya pano. Akandirayira kuti ndigare muhotera kwaakagara "
Vose Mourinho uye Mkhitaryan vagara vava kugara nekugara kumaodzanyemba kumavirira kweManchester.
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Q uye As
- Une zvinhu zvisinganzwisisiki kana zvinonakidza zvinoitika kwauri kubva paunotamira kuMan United United? Zvichida mamwe mazita asina kujairika uye zvinhu?
- 'Hungu, ndinogamuchira manhamba mazhinji ... kubva kune vamwe vanhu vasingazivi.'
- Uye vanodii?
- Vose vanoda mari! '
- Ndinoramba. Ndingapa sei mari kuvanhu vandisingazivi kana kungokwereta? Handichazomboiwanazve.
- Iwe uri munhu anouraya, iwe unotenda mune ramangwana here?
- 'Ehe saizvozvo. Zuva rokuberekwa rakagadzirisa nguva yangu. Sezvakangoita mumwe munhu, zvechokwadi. Upenyu ibhuku, uye tiri vateereri vanotamba maererano nezvakanyorwa. Ini ndinotenda zvakare muzviratidzo zvezhiacac. Ndiri Aquarius '